भुलेर पनि नफ्याँक्नुस् चौलानी पानी, यस्ता छन् आश्चर्यजनक फाइदा « Canada Nepal
काठमाडौं – हामिहरुले खाना पकाउनुअघि चामललाई पखालेर फ्याकिने पानीलाई चौलानी पानी भन्ने गरिन्छ । धेरैले चौलानी पानीको फाइदा बारे थाहाँ नहुँदै त्यसै फ्याक्ने गर्छन् । तर हामिले फ्याक्ने गरेको चौलानी पानी निकै उपयोगी छ ।
रक्तचाप नियन्त्रण – चौलानी पानीको सेवन गरेमा रक्तचापको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यो दिनदिनै एक गिलास पिएमा उच्च रक्तचापमा फाइदा गर्छ ।
छाला सफा र चम्किलो – शरिरलाई उर्जा दिने यो पानीले अनुहारका विभिन्न समस्या पनि समाधान गर्छ । चामलको पानीले मुख धोएमा छाला सफा र चम्किलो हुन्छ । त्यस्तै डण्डीफोर, दाग धब्बा पनि आउन दिदैन । चामलको पानीले सुत्नुअघि आँखाको वरीपरी लगाएमा आँखामा चमक आउछ ।
शरीरमा पानीको कमी हुन नदिने – चौलानी पानीको पिउने गरेमा शरीरमा पानीको कमी पनि हुँदैन । यसले सबै आवश्यक पोषक पदार्थ दिने गर्छ । त्यसैले यसमा दुध मिसाएर खानु पनि राम्रो हुन्छ ।
कपालको समस्या समाधान – चौलानी पानीले कपालको समस्या पनि समाधान गर्छ । यदि कपाल झर्ने समस्या छ भने पिउँदा वा त्यसले कपाल नुहाउँदा कपाल झर्दैन । यसले कपालको जरा बलियो बनाउने गर्छ ।
हाड बलियो – चौलानी पानी नियमित पिउने गरेमा हाड बलियो हुन्छ । आधा गिलास चौलानी र आधा गिलास दूध मिसाएर पिउँदा हाड बलियो हुने गर्छ ।
पाचन प्रक्रिया – दिनहुँ चौलानी पानी पिउने गरेमा पाचन प्रक्रिया पनि राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा पेटका असल ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय हुन्छन् र पाचन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँछ । यसको सेवनले पानीको कमी हुन नदिई कब्जियतको समस्या पनि समधान गर्छ ।
तौल घटाउँछ – चौलानी पानी नियमित सेवन गरेमा मेटाबोलिजम बढ्छ । यसमा फाइबर भरपूर हुनाले भोक पनि लाग्दैन । जसले तौल घट्छ । बान्ता हुने समस्या छ भने पनि यसको सेवनले समाधान गर्छ ।
प्रकाशित मिति : माघ ९, २०७८ आइतबार ३ : २५ बजे
कुन अंगमा तेल मसाज गर्दा के के लाभ ?
मानिस चाहिँ फरक फरक तर स्वभावहरु चाहिँ मिल्ने ! बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ
उकुच पल्टेमा गर्न सकिने घरेलु उपचार
घरभित्र गर्मी बढ्यो ? यसरी शीतल बनाउनुहोस्
टन्न खाएर पनि मोटोपन घटाउन सम्भव छ ? छ, तर एउटा शर्त मान्नु पर्छ
बच्चालाई खोकी लागेमा घरैमा गर्न सकिन उपचार